‘प्रदेशमा पहिलो पटक फस्ट स्टेपले छात्रवृत्ति प्रदान गर्दैछ’ | Mechikali Daily
‘प्रदेशमा पहिलो पटक फस्ट स्टेपले छात्रवृत्ति प्रदान गर्दैछ’
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: ३० फाल्गुन २०७४, बुधबार ०८:३५
बुटवल÷बुटवलमा पछिल्लो समय अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला (एजुकेशन फेयर) गर्ने संस्कार बढ्दै गएको छ । शैक्षिक मेलामा विद्यार्थीहरूले पनि चासो दिएर एजुकेशन फेयरमा आफूलाई आवश्यक पर्ने ज्ञानसमेत हाँसिल गर्दै आएका छन् । यस्तै बुटवल–९ मिनचोकस्थित फस्ट स्टेप एजुकेशन कन्सलटेन्सी प्रालिले पनि आउँदो चैत ९ र १० गते बुटवलमा एजुकेशन फेयर तथा सिइएसटी छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम गर्दै छ ।
फस्ट स्टेप विगत १० वर्षदेखि बुटवलका रहेर विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक परार्मश दिनुका साथै अष्ट्रेलिया, न्यूजल्याण्ड र भारत अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई पठाउँदै आएको छ । उक्त कार्यक्रमको तयारी धमाधम कन्सलटेन्सी धमाधम गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा रहेर मेचीकालीकर्मीले फस्ट स्टेप एजुकेशन कन्सलटेन्सीका प्रवन्ध निर्देशक अमित पौडेलसँग कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः
तपाईले एकसाथ दुई वटा कार्यक्रम राख्नुभएको रहेछ के–के कस्ता–कस्ता कार्यक्रम हुन् ?
हो,हामीले आउँदो चैत ९ र १० गते अर्थात् (२३ र २४ मार्च) का दिन बुटवलको आम्रपाली कटेजमा एजुकेशन फेयर र प्रदेशमै पहिलो पटक विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं । छात्रावृत्ति कार्यक्रम हाम्रो प्रदेश नम्बर पाँचमा नै पहिलो हो । हाम्रो लाभदायी ग्यारेन्टीसहितको छात्रवृत्ति कार्यक्रम हो ।
छात्रवृत्ति कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले कसरी सहभागी हुन पाउँछन् ?
हामीले आउँदो चैत ७ गतेसम्मका लागि फारम वितरण गरेका छौं । उक्त फारमहरु विभिन्न कलेजहरुमा पनि वितरण गरेका छौं । उक्त फारमको शुल्क हामीले २ सय निर्धारण गरेका छौं । जहाँसम्म छात्रवृत्ति परीक्षामा कसरी सहभागी हुने भन्ने कुरामा हामीले १ घण्टाको परीक्षा राखेका छौं । जहाँ ६० वटा वस्तुगत प्रश्नहरू हुन्छन् । उक्त प्रश्नहरूमा रहेर उत्तर दिने हो । जसले सबैभन्दा धेरै उत्तर मिलाउनेछन् । उसले पहिलो छात्रवृत्ति पाउनेछ ।
छात्रवृत्ति रकम कति–कति छ नि ?
हामीले पहिलो हुनेलाई १ लाख, द्वितीय हुनेलाई ५० हजार, तृतीयलाई २५ हजार, चाँैथोलाई १५ हजार, ६ देखि १० औं रेङक ल्याउनेलाई १० हजार र ६ देखि ५० रेङक ल्याउनेलाई सहभागीलाई ५ हजार रूपैयाँ दिने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
सिइएसटी छात्रवृत्ति कार्यक्रममा कति विद्यार्थीहरूले भाग लिँदैछन् ?
अहिलेसम्म ८ सय विद्यार्थीले फारम भरेका छन् । आउँदो चैत ७ गतेसम्म फारम भर्न पाइने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौं । सो दिनसम्म २ हजार विद्यार्थीहरू सहभागी हुने हाम्रो अपेक्षा छ । कार्यक्रममा भाग लिन कक्षा ११ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।
अब कुरा गरौँ एजुकेशन फेयरको के उद्देश्यले शैक्षिक महोत्सव गर्न थाल्नुभयो ?
हामी विगतमा पनि एजुकेशन फेयर गर्दै आएका छौं । अहिले पनि विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक परार्मश दिन कार्यक्रम गर्ने तयारीमा लागेका छौं । छात्रवृत्ति कार्यक्रम र एजुकेशन फेयर एउटै स्थान (आम्रपाली कटेज) मा हुनेछ । छात्रवृत्तिमा सहभागी भएपछि विद्यार्थीहरू शैक्षिक परामर्श लिनेछन् ।
कुन–कुन देशका कति कलेजका प्रतिनिधिहरू कार्यक्रममा आउनेछन् ?
हामीले विशेष गरी अष्ट्रेलिया, न्यूजल्याण्ड र भारतमा विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि पठाउँदै आएका छौं । कार्यक्रममा अष्ट्रेलिया, युएसए र भारत गरी ३ वटै देशका गरी २० भन्दा बढी कलेजका प्रतिनिधिहरू आएर विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँको शिक्षा, छात्रावृत्ति, हावापानी र वातावरणदेखि सबै कुराहरू विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराइने छ ।
कति स्टल रहने छन् ?
एउटा कलेजका एउटा स्टल राखिने छ । त्यसै आधारमा २ वटा छटटा छुटटै स्टलहरू हुनेछन् । जहाँ विद्यार्थीहरूले बसेर आफ्नाले कुन विषय अध्ययन गर्ने र कुन कलेज छनौट गर्नेलगायतका विषय गरिराईमा पुगेर बुझ्न पाउनेछन् ।
कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीलाई के–के उपलब्ध गराइन्छ ?
शैक्षिक महोत्सवमा सहभागी विद्यार्थीहरू आफू अध्ययन गर्न जान चाहेको देशको लागि प्रोसेस गर्दा भारी छुट हामीले दिनेछौं । त्यसका साथै हरेक दिन लक्की ड्रमार्फत स्मार्ट मोबाइल फोन पनि विद्यार्थीहरूले पाउनेछन् । कार्यक्रम बिहान ११ बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म चल्नेछ ।
अहिलेसम्म तपाईहरूले कति जना विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेश पठाउनुभयो ?
हामी बुटवलका सबैभन्दा जेठो कन्सलटेन्सी हौं । १० वर्ष भयो हामीले सेवा दिन थालेको । हामीले भारतमा २ हजार, अष्ट्रिलया १ सय र न्यूजल्याण्ड ३० जना विद्यार्थीलाई पठाइसकेका छौं ।
तपाईहरूका कुन–कुन ठाउँमा शाखा कार्यलयहरू छन् ?
हाम्रा शाखा त्यति धेरै त छैनन् । ३ वटा छन् । तर,सम्पर्क कार्यालयहरू धेरै छन । चितवन, दाङ, विराटनगर, जनकपुर, दमक, इटहरी, विर्तामोर्ड र पोखरामा हाम्रा सम्पर्क कार्यालयहरू रहेका छन् ।
विद्यार्थीहरू उत्कृष्ट गन्त्व्य शैक्षिक गत्त्व्यमा पु¥याउने हाम्रो मूल उद्देश्यले हो । हामी दुवै कार्यक्रमको तयारी तीव्र गतिमा गरिरहेका छौं । हाम्रो अभियानमा तपाईहरूको साथ र सहयोग चाहिन्छ । कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिने आवसर दिनुभएकोमा यहाँ अनि हजुरको मिडियालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
४ चैत्र २०७५, सोमबार ०१:४७
२१ माघ २०७५, सोमबार ०१:२६